Xavi Hernandez oo ka warbixiyay fursada ay Barcelona u heysato in markale ay lasoo wareegto Neymar Jr – Gool FM
Xavi Hernandez oo ka warbixiyay fursada ay Barcelona u heysato in markale ay lasoo wareegto Neymar Jr
(Spain) 12 Luulyo 2019. Halyeeyga kooxda Barcelona ee Xavi Hernandez ayaa xaqiijiyay sida ay u adag tahy in markale uu Neymar Jr dib ugu soo laabto garoonka Cump Nou inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Dhinaca kale Xavi Hernandez ayaa amaanay talaabada uu Neymar Jr dib ugu soo laabanayo garoonka Cump Nou, isagoo intaa ku daray inuu muhiim u noqon doono kooxda haatan ee Barcelona.
Wargeysyo badan ayaa xaqiijinaya inay Barcelona xiiseyneyso inay lasoo saxiixato xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr, kaasoo qorsheynaya inuu ka tago PSG, sababa la xiriira inuusan ku faraxsaneyn waxaana jira warar kale ee sheegaya inuu u dhaqaaqi karo Real Madrid.
Hadaba Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu Xavi Hernandez kaga hadlay arrinta Neymar Jr waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan la shaqeeyay Neymar Jr, waxaana la leeyahay xiriir fiican isaga, wuxuu noqon doonaa heshiis weyn ee dhanka Isboortiga ah”.
“Hase yeeshee waxaan u arkaa inay tahay arrin aad u adag, waxaan u maleynayaa in soo laabashadiisu ay adag tahay, laakiin sidoo kale waxaan aragnay waxyaabo qariib ah oo ka dhacaya kubada cagta, waxaana tusaale nooga filan qaabkii uu Neymar kaga dhaqaaqay Barcelona isla markana uu ugu biiray PSG aduun dhan 222 milyan euro, Marnaba ma moodeynin nolosheyda inay sidaas dhici doonto”.
“Sidaas darteed waan arki doonaa waxa dhaca, Neymar waa mid ka mid ah ciyaartoyda adduunka ugu fiican, wuxuu sameyn karaa farqiga, laakiin aan aragno waxa ay Barcelona go’aansato”.
RASMI: Isku aadka wareega afar dhamaadka Koobka qarammada Afrika 2019 oo daaha laga rogay
Kooxaha Tottenham Hotspur iyo Arsenal oo ku dagaalamaya saxiixa xiddig ka tirsan Real Madrid